Anarana : Martin Luther King
Teraka : 15 Janoary 1929
Maty: 4 Aprily 1968
Martin Luther King dia mizaka ny zom-pirenen'i Etazonia teraka ny 15 Janoary 1929 tao Atlanta ary maty ny 4 Aprily 1968
Martin Luther King Jr, teraka tao Atlanta (Georgia) tamin'ny 15 Janoary 1929 ary namono olona ny 4 Aprily 1968 tao Memphis, Tennessee, dia pasitera afrikanina-amerikana Baptist, mpikatroka tsy mahery setra ho an'ny zon'ny olon-tsotra any Etazonia. United, hisian'ny fandriampahalemana sy fanoherana ny fahantrana.Izy ireo dia mandamina sy mitarika hetsika toy ny fahirano ny fiara fitateram-bahoaka Montgomery hiaro ny zon'ny olona mifidy, fanonganana ary ny fampiasana ireo foko vitsy an'isa. Nanatanteraka kabary malaza izy tamin'ny 28 aogositra 1963 teo anoloan'ny Fahatsiarovana Lincoln any Washington nandritra ny volana martsa ho an'ny asa sy ny fahalalahana: "Manonofy aho". Tohanan'i John Kennedy izy amin'ny ady amin'ny fanavakavahana ara-pirazanana any Etazonia; ny ankamaroan'ireo zon'ny zo ireo dia hampiroborobo amin'ny lalàna momba ny sivily sivily ary ny lalàna mifidy ny mpifidy izay tarihin'i Lyndon B. Johnson.Martin Luther King no nahazo ny loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana indrindra tamin'ny 1964 noho ny tolona tsy nitokona azy tamin'ny fanavakavahana ara-pirazanana sy ny fandriam-pahalemana. Avy eo izy dia nanomboka fampielezan-kevitra hiadiana amin'ny Adin'i Vietnam sy Poverty, izay nifarana tamin'ny taona 1968 tamin'ny famonoana tamin'ny fomba ofisialy an'i James Earl Ray, izay mbola iadian-kevitra ihany ny fanamelohana sy ny fidirany amin'ny tetika.Nomem-pankasitrahana avy hatrany ny medaly amin'ny fahalalahana ho filoham-pirenena nataon'i Jimmy Carter tamin'ny 1977, ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny zon'olombelona tamin'ny 1978, ny medaly amin'ny alàlan'ny Kongresy volamena tamin'ny 2004, ary noheverina ho iray be indrindra amin'ireo mpanoratra Amerikana lehibe indrindra1. Hatramin'ny 1986, ny Andron'i Martin Luther King dia fialantsasatra any Etazonia.
Martin Luther King dia zanaky ny pasitera batista Martin Luther King Sr sy i Alberta Williams King, mpikarakara ny fiangonana. Manana rahavavy be taona izy, Christine King Farris, ary zandriny iray, Albert Daniel Williams King. Teraka tamin'ny 501 Aubrun Avenue any Atlanta, tao amin'ny trano iray izay voatahiry sy lasa tranombakoka nasionaly, dingana fotsiny avy ao amin'ny Eglizy Ebenezer Baptist, izay itoriany ny rainy. Nihalehibe izy tamin'ny Amerika segregationist, tao amin'ny tontolo iray manana tombontsoa mandritra ny fotoana. Ny zava-niainany voalohany momba ny fisarahana fanavakavaham-bolon-koditra tamin'ny taona enin-taona, raha nisy mpilalao fotsy roa nilaza taminy fa tsy avela hilalao miaraka aminy intsony izy ireo. Ny reniny dia manazava fa izy ireo izao dia ao amin'ny sekoly segregationista fotsy izao, nefa nasongadiny fa tsara toy ny olona3 izy.Niditra 15 taona izy dia niditra tao amin'ny Oniversite Morehouse, oniversite natokana ho an'ny zazalahy mainty hoditra, rehefa nitsambikina tao anatin'ny lisea roa taona ary tsy nahazoana tamim-pomba ofisialy ny fahazoana diplaoma diplaoma. Nahazo diplaoma «Bachelor of Arts» tao amin'ny sosiolojia tamin'ny 20 jona 1948 izy ary niverina tao amin'ny Crozer Theological Seminary ho an'ny Bachelor of Divinity any Chester, Pennsylvania - izay mifandraika amin'ny mari-pahaizana teolojika - izay azony tamin'ny 12 Mey 1951. Nahazo ny dokotera tamin'ny teolojia tao amin'ny Oniversite Boston tao izy tamin'ny 18 Jiona 1954. Fiampangana plagiarism manohitra ny disertation an'ny dokotera tao amin'ny oniversite Boston dia nifarana tamin'ny 1991 tamin'ny fanadihadiana ofisialy nataon'ny tompon'andraikitry ny oniversite. Nofaranany fa ny ampahatelon'ny tesis iray dia nariana tamin'ny lahatsoratra nosoratan'ny mpianatra nahazo mari-pahaizana taloha, saingy tapa-kevitra ny tsy hanaisotra ny anaram-boninahiny amin'i Martin Luther, satria ilay "tesis" dia mbola "fandraisana anjara feno. hahafantatra »5. Ao ihany koa ny fahazoan-dàlana mampihetsi-po any amin'ny kabary an'ny mpanjaka sasany, fa i Keith Miller dia nanambara fa fa amin'ny tranga farany dia fomba fanao mahazatra an'ny amerikana afrikana ary tsy azo raisina ho toy ny plagiarisme izany. Na izany aza, araka ny fanamarihan'i Theodore Pappas ao amin'ny bokiny momba ilay lohahevitra 7, dia nandeha tamin'ny fitsipiky ny famokarana ara-tsaina sy plagiarism i Martin University King.Tao anatin'ny fahatanorany izy dia voataonan'ny asa soratr'i Karl Marx, Mohandas Karamchand Gandhi, ilay pasifista sy pasitista sosialisista Norman Thomas ary Reinhold Niebuhr amin'ny kristianisma sosialy. Tamin'ny 1952, tamin'ny taratasy ho an'ny vadin'i Coretta ho avy izy dia nanoratra izy fa "ny kapitalisma dia tonga hatramin'ny faran'ny fampandrenesana tantara" ary nanambara ny tenany ho "sôsialista".Manambady izy, ny 18 jona 1953, i Coretta Scott, izay hitondra ny anarany ho tonga Coretta Scott King. Nanan-janaka efatra izy ireo: Yolanda, teraka tamin'ny 1955, Martin Luther King III, teraka tamin'ny 1957, Dexter Scott, teraka tamin'ny 1961, ary Bernice, teraka tamin'ny 1963.
Tamin'ny 1954, rehefa tonga tany Montgomery, Alabama. Ny atsimon'i Etazonia tamin'izany fotoana izany dia voamariky ny herisetra amin'ny mainty, izay nifarana tamin'ny 1955 tamin'ny famonoan-tena fanavakavahana an'i Emmett Till, 14 taona, ilay pasitera George W. Lee ary mpikatroka ho an'ny sivily. Lamar Smith.Tamin'ny 1 Desambra 1955, rehefa nosamborina i Rosa Parks, vehivavy mainty noho ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny segregationista ao an-tanàna tamin'ny fandavany ny hanome ny toerany ho an'ny lehilahy fotsy iray, dia nitarika ny fitaovam-piadiana an'ny bus Montgomery izy noho ny fanampian'i Pastor Ralph Abernathy ary Edgar Nixon, talen'ny vondron-tobim-pirenena ao amin'ny Fikambanana Nasionaly ho an'ny Fandrosoan'ny olona miloko. Ny mponina mainty hoditra dia manohana ny fanaovana ankivy ary manangana rafitra carpooling. Martin Luther King dia nosamborina nandritra io fanentanana 382 andro io ary nanjary henjana be noho ireo segregationista fotsy izay manao fampihorohoroana: ny tranon'i Martin Luther King dia voatafika miaraka amin'ny baomba mitambatra ny marainan'ny 30 Janoary 1956, ary koa ny an'ny Ralph Abernathy sy fiangonana efatra, ary i King dia iharan'ny herisetra ara-batana12. Ny fananan-joto dia matetika voatafika amin'ny vatana, fa ny mainty 40000 eto an-tanàna kosa dia mandeha an-tongotra, indraindray hatrany amin'ny 30 km, mankany amin'ny toeram-piasan'izy ireo. Ny ankivy ity dia nifarana tamin'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana Tampony Amerikana tamin'ny 21 Desambra 1956 izay nanambara ny fisarahana eo amin'ny bus, trano fisakafoanana, sekoly ary ny toerana hafa tsy ara-dalàna12.Tamin'ny 1957, izy dia nitana andraikitra lehibe tamin'ny fananganana ny Komitin'ny Mpitarika Kristiana any Atsimondrano (SCLC), izay nifidianana azy ho filoham-pirenena sy ny ambiny mandra-pahafatiny. Ny SCLC dia fikambanana milamina izay mandray anjara mavitrika amin'ny Hetsika sivily amin'ny alàlan'ny fikarakarana ny fiangonana amerikana afrikanina mba hanao fihetsiketsehana tsy misy herisetra. Mifikitra amin'ny filozofia ny tsy fankatoavana sivily tsy misy herinaratra i King araka ny nofaritan'i Henry David Thoreau14 ary nahomby tamin'ny fampiasany an'i India Gandhi15. Notsaroan'ny mpiaro ny zon'ny olon-tsotra Bayard Rustin, nanapa-kevitra ny hampiasana izany izy mandritra ny hetsika CSCC.Tamin'ny 1958, nasehony ny fomba fijeriny ny fanavakavaham-bolon-koditra sy ny fitainan'ny tsy fitoviana ary ny fankahalana izay nahatezitra azy tao amin'ny boky Stride mankany amin'ny fahalalahana; ny tantara Montgomery ("ny diabe mankany amin'ny fahafahana"):"Ny lehilahy matetika mifankahala satria samy mifampiahiahy; Matahotra izy ireo satria tsy mifankahalala; tsy mifankahalala izy ireo satria tsy afaka mifampiresaka; tsy afaka mifampiresaka izy ireo satria tafasaraka. "Raha nanao sonia ny bokiny tao amin'ny fivarotana iray tao Harlem ny 20 septambra, dia notsindron'i Izola Curry, vehivavy mainty izay miampanga azy ho mpitarika kominista ary hotsaraina ho tsy mahay mandanjalanja. Martin Luther King dia nitsoaka an-kitsirano ny fahafatesana, niaraka tamin'ny hodi-masaka vita amin'ilay mpanao fanapahana an-taratasy izay nanorotoro ny aorta. Martin Luther dia nanadino ny mpanafika azy ary tamin'ny fanambarana ho an'ny mpanao gazety dia manasongadina ny herisetra ataon'ny fiarahamonina amerikana:"Ny lafiny mampientanentana amin'ity traikefa ity dia tsy ratra olona iray. Mampiseho izany fa ny tontolo fankahalana sy ny lolom-po dia manakaiky ny firenentsika ary tsy maintsy ho tafarina tokoa ny fidirana amin'ny herisetra tafahoatra. Androany aho. Rahampitso izany dia mety ho mpitondra hafa na koa lehilahy, vehivavy na ankizy izay iharan'ny herisetra sy ny habibiana. Manantena aho fa hanaporofo ny fananganana ara-tsosialy ity traikefa ity amin'ny fanehoana ny filàna maika ny tsy fandeferana hitantana ny raharahan'olombelona. "
Tamin'ny 1959 izy no nanoratra ny The Measure of A Man, ezaka hanehoana endrika tsara indrindra amin'ny fiaraha-monina ara-politika, ara-tsosialy ary ara-toekarena, avy amin'ilay lalao atao hoe Ahoana ny Lehilahy? (Iza ny lehilahy?) Voasarika.Nanomboka nanenjika an'i Martin Luther King tamin'ny FB1 ny FBI, satria natahotra ny hanandrana ny Kominista ny hetsika zon'ny sivily. Raha tsy misy porofo hita, ny masoivoho dia mampiasa ny antsipirihany sasany izay noraketina tao anatin'ny enin-taona mba hanandrana hanalàna azy amin'ny andraikiny amin'ny maha mpitarika ny fandaminana.Martin Luther King dia nanambara fa ny fihetsiketsehana nokasaina sy tsy mahery setra manohitra ny rafitra atsimon'i atsimo fantatra amin'ny lalàna Jim Crow dia hitondra fampitam-baovao marobe momba ny ady amin'ny fitovian-jo sy ny zon'ny olona mainty hoditra. Ny kaonty mpanao gazety sy ny fahitalavitra dia mitatitra ny tsiambaratelo isan'andro sy fanalam-baraka ataon'ireo Amerikana afrikana any atsimon'i Etazonia, ary koa ny herisetra sy fanenjehana ataon'ireo segregationista amin'ireo mpikatroka ho an'ny sivilizasiona, namokatra. onjan'ny fangoraham-po amin'ny hevitry ny besinimaro momba ny hetsika sivily izay nanjary lohahevitra politika manan-danja indrindra any Amerika tamin'ny taona 1960.Martin Luther King nandamina sy nitarika diabe ho an'ny zon'ny mpifidy amerikana afrikana, ny fanendrena, ny lalànan'ny asa ary ny zon'ny fototra hafa. Ny ankamaroan'ireo zon'olombelona ireo dia nolaniana toy ny lalàna mifehy ny lalàna momba ny sivily sivily tamin'ny taona 1964 sy ny lalàna mifehy ny fifidianana amin'ny taona 1965. Martin Luther sy ny SCLC dia nampihatra tamim-pahombiazana ny fitsipiky ny fihetsiketsehana tsy mahery setra tamin'ny alàlan'ny fisafidianana stratejika ny toerana sy ny fomba fanoherana izay mitarika fifandonana mahavariana amin'ireo manampahefana segregationist
Ao amin'i Freebase:  Archived Janoary 24, 2015 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Luther_King&oldid=1022723"
Teraka tamin'ny taona 1929
Maty tamin'ny taona 1968